Burco maayirkeedii midigtay ku haysaa.
Thursday 6th May 2021 15:00:18 in Aragtida Dadweynaha by Madaxa Wararka
Waxaan wakhti yar siiyay aan kaga bogto barnaamij su'aalo lagu waydiinayey saddex tartame
, oo u sharraxan kuraasta deegaanka ee degmada Burco, oo lagu qabtay Hotel-ka Isha Burco. Saddexda ninba, waxa ay ahaayeen rag muddakar ah oo aqoon iyo ilbaxnimo leh. Balse waxa kaliya ee aan xulashadayda ku saleeyay waxa ay tahay, waa xogogaalnimo.
Burco dadkan u sharraxan hadda, waxa ay u dirsanaysaa waa shaqo iyo adeeg bulsho. Shaqada meesha taalla, waxa shaqdaa lagu qabanayo ee Xeer, Xafiis iyo qorshaba ah, waxaa si dhab ah dadkii madasha soo camiray ee waydiimaha waydiinayey gacanta ka saaray, isaga oo waliba taabsiinaya oo aan leexleexad iyo hadal tumasho ku raagayni, waa Cabdirisaaq Hero
Cabdirisaaq raggii kale waxa uu kaga duwanaaday waxa ay ahayd: in uu reer Burco yahay. Ku dhashay, ku dhalay, wax ku bartay, ka shaqeeyay. Waxa kale ee uu kaga duwanaaday waa in aanu degmada Burco kaliya aanay xogtiisu ku koobnaane, uu tuulo kasta oo gobolkaasi ka kooban yahay, uu baahideeda u qaybsanyahay sida uu magaciisa u qabsanyahay.
Waydiintii ugu mudnayd ee saddexda ninba la waydiiyay, oo ah halka ay ka bilaabmayso shaqada loo dirsanayaa waxa ay ahayd: halka ay ka keenayaan dhaqaalaha ay ku horumarinayaan Burco, oo ah magaalo aan kastamo lacago qabta iyo wax soosaar kale oo badan lahayn. Runtii warcelintiisa ayaa ugu mudnayd, waayo waxay ahayd xogogaal. Wuxuu dadkii meesha joogay ugu horreynba fahan ka siiyay, Burco halka ay wax kasoo galaan. Wuxuu sheegay, in Burco ay lacagtu uga timaaddo Shan meelood: Kabka dowladda dhexe siiso D/H ee dalka, Cashuurta degmada laga soo uruuriyo, Haayadaha magaalada ka shaqeeyaa waxa ay ugu deeqaan, Kastan wax soo saara oo looga jaro kab u gaara degmada (10%) iyo Amaah ay Baanka dowladda ka qaadato. Waxa uu sheegay in haddii lacagahaa meelahaas uga yimaaddaa, ay ku filnaan waayaan horumarka degmada, in ay dayn ka qaadanayaan Baanka dhexe, oo ay ku horumarinayaan degmadooda.
Cabdirisaaq labadii nin ee kale wuu ka Burcaawisanaa. Dadkii madasha u yimi waydiimaha, qof qof ayuu u garanayey. Runtii waa nin maskax ahaan aad u dhisan, oo qaybsan baahiyaha dadka uu matali doono, haddii uu hoggaan u noqdo.
Burco maayirkeedii midigtay ku haysaaye, ha u hiiliso oo ha aaminto dadkeeda la duruufta ah ee aan maalinna ka fogaan.
W.Q Cabdicasiis Mirre
[Xasaasi:-] Madax-Dhaqameedka Beesha Barriga Burco Oo Ku Gacansaydhay Kulan Uu Doonayay Inuu Madaxweyne Biixi La Yeesho
"Nin Aan Kuu Ogolayn Maayirka Burco Sidaad U Ogolaan Kartaa Inuu Madaxweyne Noqdo" Hinda Gaani Eedeeymo U Jeed
[Xasaasi:-] Maayerka Burco Oo Dhaliilo Ku Karbaashay Xisbiga WADDANI & Nuxurka Fariin Uu Udiray Madaxweyne Muuse Bii
UCID Iyo WADDANI Oo Ku Heshiiyey In Maayarka Iyo Maayar Ku-xigeenka Burco Uu Qaato Xisbiga UCID.
[Daawo:-] Dadwaynaha Magaalada Burco Oo Ka Hadlay Tartanka Maayarnimada Magaalada.
Yaa u qalma duqqa degmada Burco?
Goob Joogayasha Doorashadii Somaliland Oo Ka Duulay Madaarka Burco Iyo Jawiga Lagu Ambabixiyay [ Muuqaal ]
[Daawo:-] Wararkii Ugu Dambeeyey Ee Sanaaduuqda Codbixinta Ee Ilaa Hadda Soo Gaadhay Magaalada Burco.